Volavola sy fivoriambe - Mestech Industrial Limited
Famolavolana sy fivorian'ny vokatra mandrafitra ny tsingerin'ny famokarana vokatra iray.
Mestech dia manana ekipa injeniera efa za-draharaha sy matihanina, izay afaka manome anao ny famolavolana kojakoja plastika sy vy ho an'ny elektronika mpanjifa, fitaovana elektrika, fitaovana fitsaboana ary vokatra hafa mifanaraka amin'ny zavatra takinao, ary koa ny fanamboarana modely, fanamarinana ary fanatsarana ny endrika.
Manolotra famolavolana vokatra amin'ireto entana manaraka ireto izahay:
1. Famolavolana indostrialy ho an'ny vokatra vaovao.
2. Ny famolavolana ny vokatra elektronika sy ny kojakojan-tokantrano kely.
3. Famolavolana antsipiriany ny faritra plastika sy ny faritra misy ny fitaovana.
4. Ny mpanjifa dia tokony hanome ny angona tany am-boalohany sy ny takiana manokana momba ny fisehoana sy ny haben'ny endriny, ary manome ny sary 3D na 2D an'ny singa PCBA, ny tonon-taolana ary ny faritra hafa mifandraika amin'ny endrika sy ny haben'ny vokatra.
5. Manaova prototypes hijerena ireo sary famolavolana, ary hamarinina ny endriny ary ataovy lafatra ny endriny. Ary asehoy ny mpanjifa raha hanamafy.
Manangona vokatra ny mpiasa
Ny sary sary
Famolavolana vokatra elektronika
Famolavolana vokatra silika
Famolavolana ampahany amin'ny cast
Mestech dia nanangana rafitry ny famokarana sy ny rojom-pamokarana somary feno. Ankoatry ny famolavolana vokatra vaovao, afaka manome mpanjifa serivisy mijanona iray isika ao anatin'izany ny famokarana bobongolo, ny famokarana sy ny fividianana ampahany, ny fivorian'ny vokatra, ny fitsapana, ny fonosana ary ny fitaterana.
1. Manfacturing bobongolo plastika sy famolavolana ny tsindrona, fanontana lamba vita amin'ny landy, fanodinana herinaratra
2. Fanodinana faritra vita amin'ny vy
3. Fividianana fitaovana fonosana sy fitaovana hafa fanampiny
4. Fanangonana sy fanandramana vokatra.
5. Famonosana entana sy fandefasana entana.
Raha manana foto-kevitra sy vondrona mpanjifa tsara ianao, dia faly izahay manome anao serivisy maromaro manomboka amin'ny famolavolana vokatra ka hatramin'ny famokarana vokatra vita.